Ahoana ny fomba hanatsarana ny orinasanao, ny tranokalanao ary ny fampiharana anao amin'ny fikarohana an'i Apple | Martech Zone
Ny vaovao momba an'i Apple dia manaparitaka ny azy ezaka amin'ny motera fikarohana dia vaovao manaitaitra araka ny hevitro. Nanantena foana aho fa afaka hifaninana amin'i Google i Microsoft… ary diso fanantenana aho fa tsy tena nahatratra fifaninanana manan-danja tokoa i Bing. Miaraka amin'ny solo-sain'izy ireo sy ny tranokala misy azy, mety hieritreritra ianao fa afaka mahazo ny anjarany amin'ny tsena. Tsy azoko antoka ny antony tsy ananan'izy ireo fa ny Google dia manjaka tanteraka amin'ny tsena miaraka amin'ny 92.27% zara tsena… Ary i Bing dia manana 2.83% fotsiny.
Izaho dia mpankafy Apple nandritra ny folo taona, misaotra ny namana tsara iray nividy ahy ho iray amin'ireo AppleTV voalohany. Rehefa naniry ny fananganana Apple ny orinasan-draharaha izay niasako ho Apple, dia izaho (sy ny namako Bill) no nampiasan'ny olona roa voalohany tao amin'ilay orinasa solosaina finday Mac. Tsy mbola niherika aho. Ny ankamaroan'ny olona fantatro fa ny fitsikerana an'i Apple dia hifantoka amin'ny vokatra manokana ary tsy hahita ilay sary lehibe… ny tontolo iainana Apple. Rehefa mampiasa vokatra Apple isan-karazany ao an-trano na any am-piasana ianao, dia tsy manam-paharoa ny traikefa tsy misy tohiny, ny fampidirana ary ny fampiasana azy ireo. Ary tsy inona izany fa ny Google sy Microsoft dia afaka mifaninana.
Ny fahafahan'ny Apple mampitombo ny fahamarinan'ny valin'ny karoka mifototra amin'ny iTunes, AppleTV, iPhone, Apple Pay, Mobile App, Safari, Apple Watch, MacBook Pro, ary Siri ny fampiasana - ireo rehetra ireo dia mifandray amin'ny kaonty Apple iray - dia tsy hitoviana. Na dia mifantoka ivelany amin'ny famantarana ny laharam-pahamehana aza i Google… Apple dia afaka mampiasa izany data izany, saingy avy eo dia manambatra ny valiny sy ny fihetsiky ny mpanjifany mba hitarihana tanjona kendrena sy ho personalization tsara lavitra.
Efa velona ny motera fikarohana an'i Apple
Zava-dehibe ny milaza fa ny motera fikarohana Apple dia tsy tsaho intsony. Miaraka amin'ny fanavaozana farany ny rafitra fiasan'i Apple, Apple Spotlight manolotra fikarohana amin'ny Internet izay mampiseho tranokala mivantana - tsy mampiasa motera fikarohana ivelany.
Apple dia nanamafy tokoa fa nandady tranokala tamin'ny taona 2015. Na dia tsy misy motera fikarohana mifototra amin'ny navigateur aza, Apple dia tsy maintsy nanomboka nanangana ny lampihazo hanatsarana an'i Siri - mpanampy virtoaly azy. Siri dia ao anatin'ny rafi-piasan'ny iOS, iPadOS, watchOS, macOS, ary tvOS amin'ny alàlan'ny fangatahana feo, fanaraha-maso mihetsika, fanaraha-maso ifantohana ary fampifangaroana mpampiasa amin'ny fiteny voajanahary hamaliana fanontaniana, hanao tolo-kevitra ary hanao hetsika.
Ny hery lehibe ananan'i Siri dia ny mampifanaraka ny fampiasana, ny fikarohana ary ny safidin'ny mpampiasa tsirairay amin'ny alàlan'ny fampiasana azy hatrany. Ny valiny niverina rehetra dia natokana ho azy.
Azonao atao ny mampiasa ny rakitra Robots.txt anao mba hamaritana ny fomba itiavanao an'i Applebot hanondro ny tranokalanao:
Lisitry ny laharam-pikarohana Apple
Misy ny fambara momba an'io efa navoakan'i Apple. Apple dia nanaraka ny fenitry ny motera fikarohana ary namoaka an'ity topy maso manjavozavo momba ireo singa ao amin'ny pejiny mpanohana ity Applebot crawler:
Mitambatra user engagement miaraka amin'ny valin'ny fikarohana
Fampifanarahana sy fampifanarahana ny teny fikarohana amin'ny lohahevitra sy atiny amin'ny pejin-tranonkala
Isany sy kalitaon'ny rohy avy amin'ny pejy hafa amin'ny Internet
User famantarana famantarana toerana (angona eo ho eo)
Toetra mampiavaka ny famoronana pejy
Ny fandraisan'anjaran'ny mpampiasa sy ny toerana misy azy dia hanome fotoana iray ho an'i Apple. Ary ny fanoloran-tenan'i Apple amin'ny tsiambaratelon'ny mpampiasa dia hiantohana ny fifamatorana izay tsy mampahazo aina ny mpampiasa azy.
Web mankany amin'ny App Optimization
Angamba ny fotoana lehibe indrindra mety hiasana dia miaraka amin'ireo orinasa izay manome rindranasa finday sy misy fisian-tranonkala. Ny fitaovan'i Apple hampifandray ny tranonkala amin'ny fampiharana iOS dia tena tsara tokoa. Misy fomba vitsivitsy ahafahan'ny orinasa manana fampiharana iPhone manararaotra an'io:
Rohy manerantany. Mampiasà rohy iraisan'ny rehetra hisolo ny drafitra URL namboarina amin'ny rohy HTTP na HTTPS mahazatra. Ny rohy manerana izao tontolo izao dia miasa ho an'ny mpampiasa rehetra: Raha apetraka amin'ny app ny fampiharana, dia ampidirin'ny rohy mankany amin'ny fampiharana anao izy ireo; raha tsy napetraka ny app anao dia manokatra ny tranokalanao amin'ny Safari ny rohy. Hahafantatra ny fomba fampiasana rohy manerana izao tontolo izao, jereo Tohano ny rohy manerantany.
Spanderan'ny Smart App. Rehefa mitsidika ny tranokalanao amin'ny Safari ny mpampiasa dia mamela azy ireo hanokatra ny app anao (raha apetraka) na mahazo manararaotra misintona ny app anao (raha tsy apetraka) ny Smart App Banner. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny Smart App Banners, jereo Fampiroboroboana ny rindrambaiko miaraka amin'ny Banner App Smart.
Manolotra. Ny handoff dia mamela ny mpampiasa hanohy hetsika avy amin'ny fitaovana iray mankany amin'ny iray hafa. Ohatra, rehefa mizaha tranokala amin'ny Mac azy ireo dia afaka mitsambikina avy hatrany amin'ny fampiharana anao amin'ny iPad-ny izy ireo. Ao amin'ny iOS 9 sy aoriana, i Handoff dia misy fanohanana manokana ho an'ny karoka fampiharana. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny fanohanana ny Handoff, jereo Torolàlana momba ny programa handoff.
Apple dia nanaraka ny fenitry ny motera fikarohana toy ny rakitra robots.txt ary ny fanondroana index. Ny tena zava-dehibe, Apple koa dia nanangana ny Schema.org fenitra sombin-javatra manan-karena amin'ny fampidirana metadata amin'ny tranokalanao, ao anatin'izany ny AggregateRating, Offers, PriceRange, InteractionCount, Organisation, Recipe, SearchAction, ary ImageObject.
Masinina fikarohana rehetra mahita, mandady ary manondro ny atiny amin'ny fomba mitovy amin'izany, koa ny fampiasana fanao tsara indrindra amin'ny fampiharana ny rafitra fitantanana atiny na ny sehatra ecommerce dia manakiana. Ankoatr'izay, na izany aza, ny fanamafisana ny tranokalanao sy ny fampiharana finday natambatra dia tokony hanatsara ny fahafahanao ho hita amin'ny motera fikarohana an'i Apple.
Soraty amin'ny Apple Maps Connect ny orinasanao
Manana toerana fivarotana na biraon'ny mpivarotra isam-paritra ve ianao? Raha manao izany ianao dia aza hadino ny misoratra anarana Apple Maps Connect mampiasa ny fidirana Apple anao. Tsy mametraka ny orinasanao ao amin'ny Apple Map fotsiny izany ary manamora ny fitarihana, fa mifangaro amin'ny Siri. Ary, mazava ho azy, azonao atao ny mampiditra na hanaiky ianao na tsia Apple Pay.
Ahoana ny fomba hijerena ny tranokalanao amin'ny Apple
Manolotra tokoa i Apple a fitaovana tsotra hamantarana raha azo arovana ny tranokalanao ary manana mari-pamantarana fototra hahitana. Ho an'ny tranokalako, naveriny ny lohateny, famaritana, sary, kisary mikasika, famoahana fotoana ary rakitra robots.txt. Satria tsy manana rindranasa finday aho dia niverina ihany koa fa tsy nanana rindrambaiko mifandraika aho:
Manamarina ny tranokalanao amin'ny Apple
Manantena aho fa hanome ny console ho an'ny orinasa i Apple hanarahana sy hanatsara ny fisian'izy ireo amin'ny valin'ny fikarohana an'i Apple. Raha afaka manome metrika fampisehoana Siri Voice sasany izy ireo, dia ho tsara kokoa izany.
Tsy manana fanantenana aho satria manaja ny fiainana manokana ny Apple fa tsy ny Google… fa izay fitaovana hanampiana ireo orinasa manatsara ny fahitana azy ireo dia hankasitrahana!
Tags: paomapaoma botsarintany paomaApple Maps mifandrayapple payfitadiavana paomamotera fikarohana paomaapple watchapplebotappletviOSiPhoneiTunesfinday fampiharanaSafarifikarohana lalina
Ahoana ny fahitan'ny angovo fikarohana, ny fandiavana ary ny fanondroana ny atiny?